Hafatra famaranana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Hafatra famaranana ny Taon-jobilin’ny Famindram-po
Hoan’ny Eveka, ny Pretra, ny Relijiozy sy ny Olom-boatokana ary ny Kristianina rehetra tsara sitrapoeto Madagasikara:
NY FAMINDRAM-PON’ANDRIAMANITRA, LOHARANOM-PANANTENANA HO AN’NY FITORIANA NY EVANJELY AMIN’NY FOMBA VAOVAO
Araka ny taratasy voalohany, mitondra ny lohateny hoe : « Atrehintsika amim-pahavitrihana ny fitoriana ny Evanjely amin’ny endrika vaovao », dia manome torolalana hatao amin'ny fanatanterahana izany fitorianany Evanjely amin'ny fomba vaovao izany izahay. Avy tamin’ny matoan-kevitry ny Kongresy faha 3-n’i Afrika sy Madagasikara mikasikany Famindram-pon’Andriamanitra, natao ny 9 hatramin’ny 15 Septambra 2016 tao amin’ny Sanctuaire Famindram-pon’Andriamanitra, tao Kigali, Rwanda. Nanotrona izany fotoana lehibe izany ny lahika miisa 524 avy amin’ny firenena 22 aty Afrika, notronin’ireo pretra miisa120 sy eveka miisa 22 ary ny Papa Fransoa izay nosoloin’i Kardinaly Laurent Monsengwo Pasinya tena – Archevêque métropolitain de Kinshasa, ny Kardinaly Robert Sarah – Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements ary ny Kardinaly Philippe Ouedraogo – Archevêque métropolitain de Ouagadougou. Ny hevi-dehibe nanainga ny kongresy dia ny hoe : « Loharanom-panantenana ho an’nyfitoriana ny Evanjely amin’ny fombavaovao ny Famindram-pon'Andriamanitra ».
· Ny Famindram-pon'Andriamanitra araka ny hita ao amin’ny Baiboly :
Ny Famindram-pon'Andriamanitra no matoan-kevitra ao anatin’ny Baiboly. Manambara ny fitiavan’Andriamanitra ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Ny asam-pamonjena nataon’i Kristy teo anivon’ny olombelonadia niafara teo ambony Hazofijaliana sy ny Fitsanganany ho velona. Ny maha olona azy no maneho ny maha lehibe ny asam-pamonjeny ny olona. Ny maha Andriamanitra azy no maneho ny halalin’ny fitiavana lehibenanoloana ny fanekeny ho sorona mba hahatanteraka ny tsy fivadihan’ny Ray Mpahary tamin'ny fifanekena nataony tamin'ny olombelona, izay nohariany ho toa Azy ary nosafidiany hatrany am-piandohana tao amin'ny Zanany ho amin'ny fahasoavana sy ny voninahitra. (Dives in Misericordiae, 62)
· Ny fampianaran’ireo Papa Ray Masina sy ny fiainan’ireo Olomasina :
Nampianatra ny Papa Joany Paoly faha 2 fa ny Famindram-pon'Andriamanitra dia mistery manana endrika maro : fitiavana mahery noho ny fahafatesana ary mandresy ny fahotana. Ny fahotana mantsy no loza lehibe indrindra amin’ny fiainan’ny olombelona. Fa « ny fetra tsy afaka hihoaran’ny ratsy dia tsy misy hafa tsy ny Famindram-pon'Andriamanitra ihany». (Mémoire et identité p.71, Joany Paoly faha 2): « Rain’ny Famindram-po ary Andriamanitry ny fiononana rehetra » (2, Kor 1, 3)
Ny Papa Joany faha 23 dia nilaza fa ny anarana tsara indrindra iantsoana an’Andriamanitra ary maneho ny asany ambony indrindra dia Famindram-po.
Nanamarika koa ny Papa Benoit faha 16 fa : « Ny fanompoam-pivavahana fanajana ny Famindram-pon'Andriamanitra dia tsy fientanam-pofotsiny ihany fa anisan’ny votoatin’ny finoana sy ny fivavahana kristianina mihitsy » (Regina caeli, 23 Aprily 2006).
« I Jesoa Kristy no endriky ny famindram-pon’ny Ray. Ao anatin’izany ny misterin’ny finoana kristianina manontolo. Ny teny lazainy, ny asany, ny tenany manontolo no entin’i Jesoa avy any Nazareta, maneho ny famindram-pon’Andriamanitra. Ilaintsika mandrakariva ny mibanjina ny misterin’ny Famindram-pon’Andriamanitra. Loharanon-kafaliana sy filaminan-tsaina ary fiadanam-po ho antsika izy. Miankina aminy ny famonjena antsika. Ny famindram-po no teny mamboraka ny misterin’ny Trinite Masina. Ny famindram-po no asa fara tampony itsenan’Andriamanitra antsika. Ny famindram-po no lalàna fototra mitoetra ao ampon’ny tsirairay, rehefa manopy maso mijery amin-kitsimpo ny rahalahiny mifanojo aminy izy, eny an-dalan’ny fiainana eny. Ny famindram-po no lalana mampifandray an’Andriamanitra sy ny olombelona, ka hahafahany manokatra ny fony hirotsahan’ny fanantenana, fa hoe tiana mandrakizay izy, na eo aza ny fetra nateraky ny fahotantsika. (MisericordiaeVultus, 2015, 1-2, Papa Fransoa)
Ny fiainan’ireo Olomasina ao amin'ny Famindram-po indray no manampy antsika hahatsapa fa ny faneken’izy ireo ho vonton’ny fitiavana tsy manam-petran’Andriamanitra ny nahatonga azy ireo ho mpamindrafo tamin'ny olona toa azy. Tonga be famindram-po izy ireo noho ny fahatsapana fa heniky ny Famindram-pon'Andriamanitra.
Ohatra, nanentana mandrakariva an’i Olomasina Mamera Teresa (Calcutta) ny « miasa ho fahamasinan’ireo mahantra, mba hanolotra Olomasina an’Andriamanitra », Masindahy Jean Bosco kosa dia nampianatra ireo tanora hoe « mitovy ny hevitry ny hoe fanantenana sy ny famindram-po ary ny fibebahana », i Masindahy Fransoa avy Assise indray dia milaza fa ny Famindram-po dia mitondra amin’ny fahalalana ny Evanjely.
· Ireo sedra atrehintsika :
Maro ny sedra atrehintsika ao anatin’izao andron’ny fanatontoloana izao. Ny mahaolona ny olona mihitsy no voatohintohina hatrany amin'ny fototry fiainam-pianakaviana : simba ny rohy mampifandray ny isam-batan’olona ary mahazo vahana ny fanimbazimbana ny aina. Eo ihany koa ny fahatarana eo amin'ny sehatry ny fiahiana ny soa iombonana ara-tsosialy ary ny fitotonganan’ny fari-piainana, toy ny kere, ny kolikoly, ny fitrandrahana tsy voarindra ireo harena, ny tsy fanananazotom-po sy fifampitokisana, ny tsy fahaiza-mitantana ny soa iombonana, ny fahabadoana, ny fanandevozana amin'ny endrika vaovao, ny fampiasana ny ankizy, ny fanararaotana ireo mpiasa. Izany rehetra izany dia zary sakana ho an’ny fivoaran’ny mahaolona, izay ivon’ny zavatra rehetra. Eo ankilan’izany rehetra izany dia mamoritra ireo efa tena marefo ihany koa ny fahasimban’ny tontolo iainana : fivondronan’ny fako, ny doro tanety, ny tsy fahampian’ny rano fisotro madio, ny fahalanian’ireo tahiry voajanahary…
· Ny fianakaviana ankohonan’ny Famindram-po :
Ny fianakaviana no toerana hibeazan’ny ain’ny olombelona. Andriamanitra izay nahary sy tompon’ny aina dia manankina izany aina izany amin'ny fianakaviana (Jenezy). Ny fianakaviana arak’izany dia miasa ho an’ny aina ary mandrafitra ny toerana ivelaran’ireo taranaka : ao no toerana hianaran’ny zaza mangataka famelana sy mamela hadisoana, hianara ny miteny hoe « azafady, misaotra » amin'ny fakana ohatra amin'ireo ray aman-dreniny (Papa Fransoa), fianarana ny fitsipi-piainana fototra ary mamehy ireo karazam-pilana ihany koa. Ao no hampitana ny haren-tsaina sy hatsaram-panahy. Ny fianakaviana no fiangonana fototra (Papa Paoly faha 6) satria i Kristy no eo afovoany rahefa miara-mivavaka izy, ary i Kristy hatrany no mampiseho ny tena fitiavana sy fatran’ny zavatra rehetra amin’ny fiainantsika (Evangelii Gaudium).
· Ny firindran’ny zava-boahary sy ny Famindram-pon’Andriamanitra :
Ny zava-boahary sy ny olombelona dia noharian’Andriamanitra ho taratry ny famindram-pony. Isika izay nataony mitovy endrika Aminy dia nomeny adidy mba hitahiry sy hiaro ny zava-boahary tsy ho samba. Arak any tenin’ny Papa Fransoa hoe: mila mitsinjo ny voahary isika ary mila fiovana lalina eo fomba amam-panao mba hiahiana izany isika (Laudato Si 5). Miantso ny olombelona tsirairay ny Papa François mba ahatsiaro hanenina.
· Ny Famindram-pon'Andriamanitra, fototry ny fanantenana sy lalivay ho amin’ny fivoarana ara-tsosialy sy ara-politika
Azo tovozina ao amin’ny Famindram-pon’Andriamanitra ny rariny, ny hitsiny, aryny fifamelana. Sitrana ao amin’ny Famindram-pon’Andriamanitra ny olana amin’ny fifandraisana sy ny aretina vokatry ny ratra anaty. Tany Rwanda, tao aorian’ny fifamonoana (génocide) ny taona 1994, noho ny fiovam-po ateraky ny finoana, sy ny ezaka niainana ny famindram-po dia afaka nandresy ny fifankahalana ny mponina ary afaka nifamela. Ny vokatr’izany dia nahazo ny hery ahafahany manangana fiaraha-monina salama sy mifanaja ary afaka mandray an-tanana ny fivoarany ara-toe-karena, araka ny tandrifiny avy izy ireo. Ny fivoaran’ny mahaolona ny olona ao anatin’ny fanajana ny soa iombonana sy ny fifampitsinjovana araka izany no ilaina mba hampivelatra ny fiaraha-monina.
Noho izany dia loharanon’ny fiadanana sy ny fandriampahalemana ny Famindram-pon’Andriamanitra ka manao ireto sos-kevitra ireto izahay ho fitoriana ny Evanjely amin’ny fomba vaovao amin’izao vanim-potoana iainantsika izao.
· Ireo fanentanana ho an’ ny fitoriana ny Evanjely amin'ny fombavaovao :
o Tsara raha misy vondrom-bavakamiaina sy manaja nyFamindram-pon'Andriamanitra isaky ny paroasy, ka tia mamaky sy mihaino ary miaina ny Tenin’Andriamanitra ary mitory izany ny mpandray anjara. Ilaina ny fahalalan’ny olona ny hasin’ny Eokaristia Masina sy ny fandraisana ny Sakramentan’ny fampihavanana ary mivavaka ho an’izao tontolo izao mba hiverenany amin’Andriamanitra tsy misy hatak’andro. Entanina izy ireo hanatanteraka ny asa famindram-po amin'ny fiainany andavanandro.
o Etsy andanin’izany dia tsara raha beazina amin'ny Doctrine sosialin’ny Eglizy ny vahoaka. Ny tompon’andraikitra ao amin’ny paroasy no handinika izay hampivoatra ny kristianina ao aminy. Ny fomba entina amin’izany hoy ny Papa Fransoa aoanatin’ny Laudato Si dia ny mijery, ny mandinika, ny manatanteraka ary ny mankalaza.
o Anisan’ny tanjon’ny fitoriana ny Evanjely amin’ny fomba vaovao koa ny fanampiana sy ny fiahiana ny fianakaviana. Hamafisina ny asa fampianaranaisan-tokatrano « ny katesizin’ny fianakaviana izay antoka tsara hibeazan’ireo ray aman-dreny mbola tanora mba hahafahany mahalala fa izy ireo dia voairaka hitory ny evanjely ao anivon’ny ankohonany » (Amoris Laetitia 287).
o Mba hirosoana bebe kokoa amin'ny fitoriana ny Evanjely amin'ny fomba vaovao dia ilaina ny fitoriana eo amin’ny sehatra fanabeazana ny ankizy sy ny tanora any an-tsekoly. Mba tena handranto fianarana marina izy ireo ary koa fahendrena sy kolontsaina hivoaran’ny mahaolona ao aminy tanteraka. Maika indrindra koa ny fitsinjovana ny tontolo iainana izay tranobe iraisantsika : toy ny mpiray tampo amintsika izy, hifampizarantsika ny fisiantsika ary toy ny renymandray antsika. Tonga toy ny tononkalo, fahafoizana sy fankasitrahana malalaka eo anatrehan’Andriamanitra izany fifandraisana vaovao izany. Dieny mbola kely ny ankizy no ilaina beazina hiaina sy hanao asa famindram-po isan’andro ampian’ny fiahiana ny zava-boaharyamin'ny alalan’ny tsy fampiasàna akora plastika, fampihenana ny fandaniana tafahoatra ny rano, fanavahana ireo fako, ny fanajana ireo zava-manan’aina rehetra, fambolen-kazo, fitsitsiana ireo zavatra mbola mety azo ampiasaina… Izany fanovàna ny fomba fiaina izany no mitondra antsika lalindalina kokoa amin'ny fiahiana ny aina (Amoris Laetitia212). Azo ampidirina ao anatin’ny katesizy izany, ao amin’ny fandalinam-pinoana, fa ao anatin’ny fikambanana masina misy ny tanora koa.
o Entanina ny fianakaviana kristianina hiara-mivavaka sy hanao Raozery. Ilaintsika ny fanampian’i Masina Maria Virjiny, Renin’ny Famindram-po ahazoantsika hery iatrehana ireo andro sarotra eo amin’ny fiainantsika. Ny tsirairay ao anatin’ny fianakaviana izay miara-mivavaka dia atambatry ny fitiavana. Miitatra ao amin’ny paroasy izanyfomba izany satria ny vavaka dia mitondra tsikelikely amin’ny fihavaozana anaty ary manampy ho amin’ny fifampitokisana sy fanentren-tena ao amin’ny fiaraha-monina rehetra.
· Famaranana :
Ho antsika kristianina katolika, ny fitoriana ny Evanjely amin’ny fomba vaovao dia miantomboka amin’ny tenantsika. Anjarantsika tsirairay aloha ny manaiky miaina ny Evanjely amin’ny lafiny ara-batana sy ara-panahy. Izay no hahafahantsika mitory an’i Kristy maty sy nitsanga-ko velona, am-pitiavana tahaka an’i Masindahy Paoly Apostoly. Koa amin’izao famaranana ny taon-jobilin’ny Famindram-po izao dia enga anie ny Famindram-pon’Andriamanitra hanavao ny fontsika, ny toetrantsika, ny ankohonam-piainana misy antsika sy ny fiaraha-monina rehetra mba hahazoantsika fahamasinana, mba hahatonga antsika ho endrik’i Jesoa be famindram-po, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Miankina amin’i Masina Maria Virjiny, Renin’ny Teny isika mangataka ny fanampiany mba ho tanteraka ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly amin’ny fomba vaovao amin’izao tontolo ankehitriny izao.
Natao teto Antananarivo faha 6 Novambra 2016
Mgr Benjamin Marc RAMAROSON
Co-Président de la Commission Episcopale pour la Nouvelle Evangélisation
Mgr Georges VARKEY
Evêque de Port Bergé
Président de la Commission Episcopale pour la Nouvelle Evangélisation
Mgr Rosario Saro VELLA : Nouvel Évêque de Moramanga - il y a 6 jours
Évêque Auxiliaire de l’Archidiocèse d’Antan : Révérend Père JEAN PASCAL ANDRIANTSOAVINA - il y a 6 jours